allsanaag.com - Nabadda Puntland waa Muqadis
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3205	Days	16	Hours	34	Minutes	31	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Nabadda Puntland waa Muqadis
Written by khalid	Maqaal Allsanaag qortay, labo Sano ka hor oo nabadda ka hadlayey ayaa mar labaad idiin ku soo celinay.
Laga soo bilaabo bur burkii dawladii Soomaaliya sanadkii 1991 ilaa maanta 2010 ,Bulshada ku nool Puntland waxay gaareen horumar dhinac walba ah, haday noqon lahayd waxbarashada, caafimaadka, isgaarsiinta, ganacsiga iyo hantida gaarka loo leeyahay.
Gobolada Puntland ayaa ahaa kuwa aad uga hooseeya gobolada kale ee Soomaaliya xiliyadii dawladihii hore ee Soomaaliya.Laakiinse sanadihii danbe nabada ka jirta degaanada Puntland iyo isku duubnaanta Bulshadeeda ayaa waxay gaareen horumar la taaban karo oo ay qireen Soomaalida kuwooda xalaasha ah iyo Bulshada caalmaka.
Horaantii Sanadihii sideetamaadkii, siddeeda Gobol ee Puntland ka kooban tahay waxa ku yaalay wax ka yar Shan dugsi oo sare ,maantana 50kii KM oo la socdaba degaanada puntland waxa ku yaala dugsi sare oo arday wax ka baranayaan iyaga oo haysta Macalimiin tayo leh, Tuulo kasta oo caruur ku nool yihiina waxa maanta ku yaala dugsi Hoose dhexe sidoo kale gobolada Puntland ma lahayn Jaamacad ama Kuliyad maantana 150 KM oo la socdoba waxaad ka helaysaa ama gaysan kartaa cunugaaga jaamacad ama kulliyad. Waxa intaa sii dheer nabada ka jirta degaanada Puntland ayaa waxay U saamaxday ama u suurta gelisay in Dad badan oo ganacsato ah ay caruurtooda u diraan waxbarasho dibadeed oo ah waxbarasho sare,Qaar ka mid ah ardaddii dibada loo diray ,waxay dib ugu soo laabteen degaanata Puntland iyaga oo halkaa ka bilaabay in ay Bulshadii ay ka tageen uga faa'iideeyan aqoonta ay soo barteen oo dhinacyada badan leh haday noqon lahay dhkhtarnimo, macalinimo, Kombuter ama Farsama gacmeed.
Nabada ka jirta Puntland ayaa sare u qaaday hantiilayaasha ama jeeblayaasha Per capita haysashada hantida gaar haaneed,iyada oo sababaha ugu weyni ay tahay dhiiranaanta maalgashiga lagu samaysanayo Puntland oo ay sabab u tahay nabadu.
Gobolada Puntland guud ahaan Ma lahyn Cisbitaalo shaqeeya sidi kuwii xamar oo kale ee Madiina iyo Dikfeer ,hase ahaatee maanta waxa ka jira Cisbitaalo badan oo lagu daweeyo Bukaan socodka qaba cudarada kal duwan, iyaga oo daryeel iyo xanaanayn siyaado ah ay maanta heleen hooyada iyo dhalaanku oo horay u ahaa dhibanayaasha ku noolaa degaanka xiliyadii Dawladihii hore. Maanta waxaad wadooyinka ku arkaysaaa Gawarida Gurmadka ah oo dadka Buka ula cararaya Cisbitaalada si loogu daweeyo.
Nabada ka jirta Puntland ayaa dhiiri gelisay in ganacsato badan ay maal gashadaan degaanada Puntland ama ka samaystaan ganacsi ,kuwaas oo u abuuray shaqooyin Kumaakun ka mid ahaa Dadkii danyarta ahaa o ku noolaa degaanda.